Fivezivezen’ny entana : gaboraraka ny fanaraha-maso | NewsMada
Fivezivezen’ny entana : gaboraraka ny fanaraha-maso
Maro ny entana mivoaka sy miditra tsy ara-dalàna eto Madagasikara amin’ny alalan’ny fiaramanidina na ny sambo. Iaraha-mahalala ny andramena, nohamafisin’ny masoivohon’i Etazonia fa tsy nisy fampidirana am-ponja ny atidoha, na iray aza. Toraka izany koa ny vatosoa sarobidy, ny volamena, ny biby arovana, toy ny sokatra, ohatra. Ho an’ny seranan-tsambo, efa miparitaka eny an-tsena ny entana lany fe-potoana azo ihinanana azy vao hitan’ny mpanjifa na tratra.
Biby tsy fanta-piaviana
Fa ny tsy ampoizin’ny rehetra, indrindra ny fitaterana an-dranomasina, tsy misy mihitsy ny paikady ataon’ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny ao, amin’ny lafiny fahadiovana. Hany ka miparitaka ny karazana loto, aretina, mikraoba, tafiditra eto amintsika ny karazam-biby tsy fanta-piaviana entin’ny sambo sy/na ao anaty kaontenera. Tsy misy fanazavana hatramin’izao ny nahatongavan’ny karazana orana misoratsoratra (écrevisse marbrées), lasa manapotika ny zavamananaina anaty rano aty an-tanety sy mamono ny hazandrano hafa. Tsy mazava koa ny fanadihadiana mikasika ireo sahona radaka, misy poizina.
Tsy misy koa ny paikady manokana hitantanana ny fako an-dranomasina, entin’ireny sambo sy kaontenera ireny, fa avarina any anaty ranomasina. Miantraika any amin’ny zava-mananaina anaty rano ireny ary misy ny miakatra an-tanety.